हर्क अर्थात् धरानका हर्ष | कुवेतको पहिलो नेपाली अनलाईन पत्रिका
← चरा ठोक्किएको आशंकामा गौतम बुद्ध विमानस्थलमा रोकियो विमान
भरतपुरको मेयरमा दाहाल र उपमेयरमा अधिकारी विजयी →
धरान : धरान उपमहानगरपालिका प्रमुखमा स्वतन्त्र उम्मेदवार हर्कराज राई (हर्क साम्पाङ) निर्वाचित भएका छन्। सत्ता गठबन्धनबाट कांग्रेस उम्मेदवार किशोर राईलगायत दलका प्रत्याशीलाई उनले पराजित गरेका हुन्। हर्कले २० हजार ८ सय २१ र निकटतम प्रतिद्वन्द्वी किशोरले १६ हजार ५९ मत प्राप्त गरेका छन्। एमालेकी मञ्जु भण्डारी सुवेदीले तेस्रो स्थानमा १२ हजार ८ सय २५ मत प्राप्त गरिन्। उपप्रमुखमा गठबन्धनबाट माओवादी केन्द्रका अइन्द्रविक्रम बेघा निर्वाचित भएका छन्। बेघाले २० हजार ५ सय १० र निकटतम प्रतिद्वन्द्वी एमालेका पदमप्रसाद लिम्बूले १७ हजार ६ सय ६ मत पाएका छन्। नवनिर्वाचित प्रमुख राईले आफूले चुनाव जिते सप्तकोसीबाट पानी ल्याएर खुवाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। त्यही प्रतिबद्धताअनुसार पानी ल्याएर खानेपानीको समस्या समाधान गर्ने राईको भनाइ छ।
कांग्रेस, एमाले नेताहरूको खराब प्रवृत्ति र दलहरूप्रति वितृष्णाका कारण धराने जनताले आफूलाई मत दिएको उनले बताए। धरान उपमहानगरपालिकामा हुने गरेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने उनले बताए। धरान बजारको व्यवस्थापन, फोहोर व्यवस्थापन, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र सामुदायिक विद्यालयको सुधार पहिलो प्राथमिकतामा रहने उनको भनाइ छ।
अन्य पदमा दलबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिसँग कसरी काम गर्नुहुन्छ भन्ने अन्नपूर्ण पोस्ट्को जिज्ञासामा उनले सबैलाई मिलाएर धरानको विकासमा एकीकृत भएर अगाडि बढ्ने बताए। ‘म व्यक्तिगत लाभ लिन निर्वाचित भएको होइन। मेरो जित भनेको धरानवासीको जित हो’, उनले भने, ‘गलत ट्र्याकमा गएको धरानलाई सही दिशामा फर्काउने पहिलो अभिभारा मेरो हुनेछ।’
स्नातकसम्म अध्ययन गरेका राई धरानमा भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्ताका रूपमा परिचित छन्। उनले सर्दु जलाधार बचाउ आन्दोलन, खानेपानी समस्याको आन्दोलन, भ्रष्टाचारविरुद्धको आन्दोलन, धनकुटे रोडको बस्ती बचाउ आन्दोलनको नेतृत्व गरे।
उनले बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बचाउ आन्दोलनको पनि अगुवाइ गरे। उनले खानेपानी आयोजनामा चरम भ्रष्टाचार भएको भन्दै आन्दोलन चर्काए। धरानवासीले खानेपानी नपाएपश्चात पानी माग्दै प्रदर्शनमा उत्रिए। सर्दु खोलामा अवैध उत्खननको विरोध गर्दा प्रहरीले पक्राउ पनि गरेको थियो।
३९ वर्षीय राई खोटाङको साविक खार्तम्छा गाविस–९ चोखाने (हाल कोपिलासगढी गाउँपालिका–२) मा जन्मिएका हुन्। गाउँकै शुक्र’bout विद्यालयबाट एसएलसी गरेका उनी २०५६ देखि धरान १८ मा बसोवास गर्दै आएका छन्।
हर्कको जितका कारण
धरान एमालेको ‘लालकिल्ला’का रूपमा परिचित थियो। २०७६ को उपनिर्वाचनमा मात्र कांग्रेसबाट तिलक राईले नगर प्रमुख जितेका थिए। एमालेका तत्कालीन अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीले यही क्षेत्रबाट २०४८ को आमनिर्वाचन जितेका थिए। सत्ता गठबन्धन र एमालेको बलियो संगठन रहेकै पालिकामा स्वतन्त्र उम्मेदवारले विजयी हासिल गरेका हुन्।
राजनीतिक विश्लेषक डा. राजेन्द्र शर्मा कांग्रेस र एमालेले राम्रो उम्मेदवार दिन नसकेका कारण स्वतन्त्र रूपमा हर्कराज विजयी भएको बताउँछन्। धरानका मतदाताले विकल्पका रूपमा हर्कराजलाई रोजेको डा. शर्माको बुझाइ छ। एमालेको उम्मेदवार छनोटलाई प्रमुख कारण मानिएको छ। एमालेले नगर प्रमुखमा भण्डारीलाई टिकट दिएपश्चात कार्यकर्तामा असन्तुष्टि बढेको थियो। भण्डारीले २०७४ को चुनावबाट नगर प्रमुख बनेका तारा सुब्बाको निधनपश्चात् कार्यवाहकको जिम्मेवारी पाएकी थिइन्। त्यस बेला पार्टी र जनताको हितभन्दा व्यक्तिगत लाभ लिने गरी विवादास्पद काम गरेको भन्दै पार्टीमा आलोचना भएको थियो।
२० वडामध्ये १० वटामा एमाले उम्मेदवार वडाध्यक्ष निर्वाचित भएका छन्। वडा नम्बर ४, ५, ७, ८, १०, १२, १३, १५, १९ मा एमालेले वडाध्यक्षसहित प्यानलै जितेको हो। वडा नम्बर २ मा अध्यक्ष र एक सदस्य उसले जितेको छ। तर, उनीहरूले पाएको मतको आधा मात्रै भण्डारीलाई गएको छ। प्रत्येक वडामा ६ पदमा सूर्यमा भोट हालेका मतदाताले नगर प्रमुखमा भने लौरो (हर्कराजको चुनाव चिह्न) छानेको देखिएको छ।
एमाले पोलिटब्युरो सदस्य हिक्मत कार्की आफ्नो पार्टीले कमजोर उम्मेदवारलाई टिकट दिएका कारण धरानमा पराजित हुनुपरेको बताउँछन्। धरानमा नगर प्रमुखको टिकट वितरणमा पार्टी नेतृत्वबाटै कमजोरी भएको नेता कार्की स्वीकार गर्छन्। (अन्नपूर्ण )